Ntụpọ nfuli na-agbanwe ngwa ngwa Peristaltic
Mgbapụta Mgbapụta nwere ọgụgụ isi
Na-ekesa mgbapụta Peristaltic
Igwe nfuli Peristaltic Industrial
Ogbe Nyefee Peristaltic Pumps
Pump ndị na-egbochi mgbawa
Pneumatic moto Peristaltic mgbapụta
Igwe nfuli piston rotary
Ndị isi mgbapụta
Igwe nfuli sirinji ụlọ nyocha
Mgbapụta nfuli sirinji ụlọ ọrụ
Mgbapụ ngwa ngwa ngwa ngwa mgbanwe
Na-ekesa mgbapụta Gear
Enwere ike iji mgbapụta mmiri sịnji mee ihe na ụlọ ọrụ electrospinning?
Ngwa nke mgbapụta sirinji mmiri Lead na eletrọspining dị elu, kedu ihe bụ eletrospinning? Igwe ọkụ eletrik dị elu bụ usoro nrụpụta eriri pụrụ iche nke ihe ngwọta polymer ma ọ bụ gbazee na-agbanye jet na mpaghara eletrik siri ike. N'okpuru ọrụ nke mpaghara eletrik, ...
Kedu ụdị mgbapụta peristaltic a na-eji maka ịdị ọcha protein?
site admin na 21-11-20
Mgbapu peristaltic Fluid Fluid nwere ike iji mee ka protein dị ọcha, a na-eji nchacha protein dị ọcha na ngwa nyocha biochemical. Ọ dị mkpa iji myirịta dị n'etiti protein dị iche iche iji wepụ mmetọ nke ihe ndị na-abụghị protein, na iji ọdịiche nke protein ọ bụla mee ihe iji pu ...
Pump Peristaltic Fluid na-enyere aka na ụlọ ọrụ Robot na-ekpochapụ
Peristaltic hose pump na-enyere aka n'ịkpọsa ụlọ ọrụ robot, teknụzụ ọhụrụ na-agbanwe mgbe niile ụzọ ndụ anyị. Ịdị ngwa ngwa nke ndụ na-eme ka anyị na-ahọrọ mgbe niile ngwa ngwa ndị dị mma na ngwa ngwa. Robots na-ekpochapụ "Oziọma umengwụ" ejirila nwayọọ nwayọọ bata na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Ụkpụrụ Ịrụ Ọrụ Mmiri Mmiri Peristaltic
Kedu ka mgbapụta peristaltic si arụ ọrụ? Peristaltic pump, nke a makwaara dị ka mgbapụta mita peristaltic, bụ ụdị mgbapụta ọhụrụ. Igwe mgbapụta peristaltic nwere akụkụ atọ: onye ọkwọ ụgbọ mmiri peristaltic, isi mgbapụta na tubing mgbapụta peristaltic. Peristaltic mgbapụta tubing bụ naanị ihe achọrọ maka njikọ mmiri mmiri maka ...
Kedu ihe kpatara mgbapụta Peristaltic ji dị mma na njikwa mmiri mmiri
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na ọganihu na-aga n'ihu nke mmepụta mmepụta ihe na ime obodo, akụ na ụba mmekọrịta mmadụ na-etolite ngwa ngwa, ma nsogbu mmetọ na-esote aghọwo ihe dị mkpa nke chọrọ ka a dozie ngwa ngwa. Ngwọta mmiri mkpofu ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ ihe dị mkpa maka akụ na ụba...
Otu esi ahọrọ mgbapụta peristaltic kwesịrị ekwesị?
Iji họrọ mgbapụta peristaltic kwesịrị ekwesị, buru ụzọ chọpụta ngwa ngwa chọrọ: 1. Kpebisie ike na-agba ọsọ 2. Kedu ụdị usoro a ga-ebufe 3. Nyefee ziri ezi 4. Ọnụ ọgụgụ nke ọwa chọrọ 5. Nhọrọ nrụgide, usoro nchịkwa, wdg. The peristaltic mgbapụta bụ tumadi mejupụtara ...
Mgbe ịzụtara mgbapụta peristaltic ihe ị ga-aṅa ntị?
Kedu ihe bụ mgbapụta peristaltic? Peristaltic pump, nke a makwaara dị ka tubing pump, bụ ụdị mgbapụta ọhụrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Igwe mgbapụta peristaltic nwere akụkụ atọ: onye ọkwọ ụgbọ mmiri peristaltic, isi mgbapụta na tubing mgbapụta peristaltic. Ọkpụkpọ mgbapụta nke Peristaltic bụ naanị ihe achọrọ maka njikọ mmiri maka perista…
Ezumike maka ọkwa ụbọchị mba
A na-eji mgbapụta peristaltic eme ihe na ngwa ụlọ nyocha
A na-eji mgbapụta peristaltic eme ihe mgbe niile na ụlọ ọrụ nyocha. Ụlọ nyocha ahụ bụ ebe nchekwa sayensị ma na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepe nke sayensị na teknụzụ. Ya mere, ụlọ nyocha ahụ nwere ihe ndị dị oke mkpa maka akụrụngwa nnyefe mmiri: 1. Oke ọsọ dị obosara na mgbasa ozi ...
Ọkachamara mgbapụta mgbapụta Peristaltic, Ọnụ ahịa mgbapụta Peristaltic
Peristaltic mgbapụta ire ere, ọkachamara mmiri mmiri ọkachamara si China.We na-enye elu-edu peristaltic mgbapụta na peristaltic mgbapụta imewe, 20 afọ nke peristaltic mgbapụta ahụmahụ, anyị na-anọgide na-innovate na kwalite ngwaahịa, na-agbalịsi ike ịbụ ọkachamara na mmiri ụlọ ọrụ, dozie mmiri mmiri. ngwọta maka ...
Kedu ihe dị iche n'etiti mgbapụta peristaltic ụlọ nyocha na mgbapụta peristaltic ụlọ ọrụ ndị ọzọ?
site admin na 21-08-23
Peristaltic nfuli, ọtụtụ ndị na-eche nke akụrụngwa eji na laboratories. Ọ bụ ụlọ nyocha peristaltic mgbapụta. Chee na ọ bụ naanị ụlọ nyocha ga-eji nfuli peristaltic, N'ezie, a na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, naanị n'ihi na ejiri ya na mbụ na ụlọ nyocha. Kedu ihe dị iche nzọ...
Ngwa mgbapụta Peristaltic na mmanụ anwụrụ ọkụ eletrọnịkị
Mmanụ sịga eletrọnịkị bụkwa E-mmiri mmiri na-ejuputa, a na-emepụta ụdị e-mmiri a site na ahịrị ndochi, nke bụ nke ngwa sistemụ mgbapụta peristaltic. Ka anyị webata gị pọmpụ mmiri mmiri Lead. Usoro mmepụta mmiri mmiri E-mmiri na mmanụ sịga eletrọnịkị na-ejupụta ...
Nọmba 999 Fuxing Road, Baoding, China